अब घर बनाउँदा माटो परीक्षण अनिवार्य, नगरे खानेपानी, बिजुली लगायतका सुविधा नपाउने ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > अब घर बनाउँदा माटो परीक्षण अनिवार्य, नगरे खानेपानी, बिजुली लगायतका सुविधा नपाउने !
काठमाण्डौं । अब तीन तल्ला भन्दा अग्ला घर बनाउँदा माटो परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोछ । माटो परीक्षणमा असफल भए घर बनाउन पाइदैन । मन्त्रीपरिषद्ले गत साता पारित गरेको भवन निर्माण मापदण्ड २०७२मा घर बनाउँदा माटो परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो ।
तीन तला भन्दा अग्ला १६ मिटर सम्मका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भवनको नक्सा पास नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले ब्यावसायीक अनुमति प्रदान गरेका ईन्जिनियरले मात्र गर्न पाउने छन्। तीन तला भन्दा साना भवन निर्माणको लागि भने सम्बन्धित विधामा प्रमाणपत्र उतिर्ण गरेका प्राविधिकले पनि नक्सा पास गर्न पाउनेछन्।
निर्माण सकिएको प्रमाण पत्र लिन मापदण्ड अनुसारको नक्सा र डिजाईन अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि मापदण्ड नपुर्याई भवन निर्माण गरेमा स्थानीय निकायले भवन आंशिक वा पुर्ण रुपमा भत्काउन सक्नेछ। भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित स्वामित्वकर्ताबाट भराउने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।
मापदण्ड विपरित भवन निर्माण गरे स्थानीय निकायले भत्काउने छन्। भत्काउन नपर्ने भवनले सरकारी सुविधा पाउने छैनन्। मापदण्ड विपरितका भवनले खानेपानी, विजुली र टेलिफोन लगायतका सरकारका न्यूनतम सुविधा सरकारले दिँदैन ।
३० भदौ २०७३, ११।००
२०७३ भदौ ३० गते १३:४५ मा प्रकाशित
सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर : १ लाख ११ हजारसम्म पैसा फिर्ता !
मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि कामकाज छाडेर झार संकलनमा स्थानीय !
नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) माओवादीमाथि प्रहरीको निगरानी सुरु
वाणिज्य बैंकहरूको शेयरमा ‘एनएमबी हाइब्रिड फन्डएल–१’ को सबैभन्दा बढी लगानी
सेयर कारोबार : लक्ष्मी र समिटमा झुम्मिए ग्राहक !
पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर,जेल सजायँ हुने
नेप्सेमा ४ कम्पनीको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन